I-Galaxy S9 kunye ne-S9 + zifumana uhlaziyo olufanelekileyo ngoMeyi 2019 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isamsung yenye yeenkampani ezazi kakuhle ukugcina izixhobo zazo zihlaziywa ngeyona nto ibalaseleyo, kwaye ngakumbi xa kuziwa kwiflegi yazo. Oku kuboniswa nge Galaxy S9, ezimbini zakhe iiflegi ukusuka kwi-2018 ngoku bafumene uhlaziyo olukhulu lwefirmware.
Nanini na xa ezi fowuni zifumana inguqulelo entsha ye-firmware, uphuculo abajamelana nalo luyamangalisa, kwaye eli tyala alikho, njengoko bafumene ukwandiswa okuluncedo kumacandelo ahlukeneyo, njengakwikhamera enye, unxibelelwano kunye nokhuseleko.
I-OTA, zombini kwi-Galaxy S9 kunye ne-S9 +, inobunzima malunga ne-380 MB. Nangona kunjalo, eyokuqala iza phantsi kwenguqulo ye-firmware 'G960FXXU4CSE3', ngelixa eyesibini iphantsi kwenguqulelo 'G965FXXU4CSE3'. Ngaphandle koku, ukuphuculwa kunye nokwenziwa kwezinto ezifanayo kuyafana ngokuhambisa okuphezulu kokusebenza okuphezulu.
Galaxy S2019 kunye S9 + Meyi 9 Uhlaziyo
Ekuqaleni, i-firmware izisa indawo yokugcina yokhuselekoEhambelana nale nyanga kaCanzibe. Oku kuyabagcina kude nasiphi na isoyikiso sokhuseleko kwaye kude kube ngoku, kanye njengoko uGoogle ebuza abavelisi ukuba bagcine izixhobo zabo ze-Android.
Kananjalo, njengoko besithetha ngalo, Icandelo lokufota kuzo zombini iifowuni liphuculwe. Oku kubandakanya ukuhonjiswa kobuso kunye nokurekhodwa okuhamba kancinci kwevidiyo, kunye nekhamera ngokubanzi. Ke ngoko, siya kuba nakho ukuqaphela ukusebenza okungcono ekufakeni iifoto, ukusukela ngoku ukuya phambili.
Unxibelelwano lweBluetooth luphuculisiwe. Asazi njalo ukuba zeziphi izinto eziphuculweyo ezinxulumene noku, kodwa kuyacaca ukuba uzinzo lonxibelelwano yeyona nto iphambili koku. Ke ukuhambisa umnxeba kunye nokuvumelanisa usebenzisa eli nqaku kunokwenzeka ukuba kuzinze.
Okokugqibela, kufanelekile ukuba uchaze ukuba ngekhe ufumane i-OTA okwangoku, ukuba ungumsebenzisi wayo nayiphi na le modeli. Oku kuqhelekile, kuba, kwiimeko ezininzi, ngokuthe ngcembe iyasasazeka. Ekupheleni kosuku, ibali liyafana nesiqhelo: zonke izixhobo ziyafumana, nokuba kungumcimbi weeyure, iintsuku okanye iiveki ezimbalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + zifumana uhlaziyo olukhulu ngophuculo olwahlukeneyo
Uphengululo lwePokémon Rumble Rush: enye igacha, kodwa ngeli xesha lisuka eNintendo